Tayrona အမျိုးသားဥယျာဉ်, Parque Nacional သဘာဝ Tayrona - စန်တာ Marta
တောင်အမေရိက ကိုလံဘီယာ စန်တာ Marta
နေရပ်လိပ်စာ: မဂ်ဂဒါလေး, ကိုလံဘီယာ
ဖုန်းနံပါတ်: +57 1 3532400
အမျိုးသားပန်းခြံဧရိယာ: 180 စတုရန်းမိုင်။ ကီလိုမီတာ
အတွက်ပန်းခြံ Tayrona ကိုလံဘီယာ မှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အသက် 30 ကီလိုမီတာ စန်တာ Marta ၏မြို့ ။ ဤသူကားအ - လူကြိုက်အများဆုံးကိုလံဘီယာများထဲမှ အမျိုးသားဥယျာဉ် ။
ပန်းခြံ၏ "မြေ" ငှက်, နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ 100 ကျော်မျိုးစိတ်တွားသွား 31 မျိုးစိတ်ထက်ပိုသုံးရာမျိုးစိတ်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ aqueous သောအဘို့ကိုသတ္တဝါအမျိုးမျိုး ပို. ပင်ချမ်းသာကြွယ်ဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးတည်းကဒီမှာ Clam 700 ကျော်မျိုးစိတ်နှင့် crustaceans ကျော် 470 မျိုးစိတ်သန္တာ၏ 110 မျိုးစိတ်နှင့်ရေမြှုပ်ထက်ပိုနှစ်ရာမျိုးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ကမ်းရိုးတန်းဇုံနှင့် Tayrona များ၏နယ်မြေမှတဆင့်စီးဆင်းမြစ်, သင်ငါး၏ 400 ကျော်မျိုးစိတ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါအရံ၏ကြွယ်ဝသောသစ်ပင်ပန်းမန်, ရေညှိ၏ 350 ကျော်မျိုးစိတ် - မြေပေါ်တွင်ပန်းခြံရေထဲမှာအပင်တွေအကြောင်း 770 မျိုးစိတ်ရှိပါတယ်။
Tyrone ခုနှစ်, သငျသညျတညဉ့်သို့မဟုတ်အသက်ရှင်ရန်ပင်ရက်အနည်းငယ်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေတန်ဖိုးထားသူများသည်တစ်ဦးဘန်ဂလိုတစ်ခုသို့မဟုတ် villa နေရှေးခယျြနိုငျ; တစ်ဦးစျေးပေါစခန်းချနေထိုင်မည့်လည်းရှိသေး၏။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာပွင့်လင်းသောလေထုထဲတွင်တစ်ဦးကြိုးပုခက်နဲ့အိပ်စက်ခြင်းငှားရမ်းနိုင်သည် - ကိုလံဘီယာမှာသဘာဝအခြေအနေများအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။
ပန်းခြံများတွင်5စားသောက်ဆိုင်ရှိပါသည်:
အယ်လ် Rincon က de Fabi ။
ထို့အပြင်စခန်းချ Tayrona ရွက်ဖျင်တဲ Lodge နှင့်ဗီလာမာရီယာ Tayrona - ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင် (နံနက်စာအခန်းထဲမှာမှုနှုန်းများတွင်ပါဝင်သည်) အ Kali ဟိုတယ်လည်ပတ်။
ကမ်းခြေအမျိုးသားဥယျာဉ်ဟာအရံနီးပါးကိုပိုမိုကျော်ကြားသည်။ ဤသည်အဓိကအားဖြစ်ပါတယ် သည့်ကမ်းခြေများ :
သငျသညျလှေ၏ကမ်းခြေကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦး nudist ကမ်းခြေလည်းရှိပါသည်။
အားလုံး "တာဝန်ရှိသူတဦးက" ကမ်းခြေဓာတ်အားဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားနှင့်တစ်ဦးကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးအခြေခံအဆောက်အဦများ (ဘာဘီကျူး, ရွက်ဖျင်တဲ, အိပ်ရာ, etc) ရှိပေးပါ။ သည် "ရိုင်း" ကမ်းခြေများတွင်ရေကူးမဖြစ်သင့်: ကမ်းနားကနေအနည်းငယ်မီတာ - အတော်လေးအန္တရာယ်များပင်လယ်ရေစီးကြောင်း; ကယ်ဆယ်ရေးန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်ဘယ်မှာပိုကောင်းရေကူးရန်။
သငျသညျဖြစ်စေထံမှနိုင်သည့်အမျိုးသားဥယျာဉ် Tayrona ရ စန်တာ Marta ၏မြို့ ကားတစ်စီး Mingueo အဘိဓါန် Santa Marta နှင့် AV ပေါ်မှာ။ Troncal Del Carib; လမ်းအကြောင်းကိုမိနစ် 40 ယူပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်၏ငါးဖမ်းရွာကနေ Taganga , သင်ရေပေါ်မှာပန်းခြံရနိုင်ပြီး, (ဒီ option ကိုထက်ဝက်စျေးနှုန်းကုန်ကျမည်) 20 မိနစ်စန်တာမာသကနေ Taganga ရောက်ရှိဖို့။
ပန်းခြံသွားရောက်လည်ပတ်၏ကုန်ကျစရိတ် - 42 တထောင်ကိုလံဘီယာပီဆို, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းကို $ 13.8 ..
ဝိန်း Fort Alakran
တောင်ပေါ်က Maunga Terevaka
စိတ်အားထက်သန်မှုအသီး - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
တစ်ဦးထှနျး mini ကိုစားဆင်ယင်အတွက်ရိုင်ယာကယ်ရီအများပြည်သူအတွက်သူမ၏ရင်သား bared
Blackcurrant ယို - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
Black ကတိုတောင်းစားဆင်ယင် - အားလုံးအခါသမယများအတွက်စွယ်စုံအဝတ်အစား
အနီရောင်ဘောင်းဘီ 2015 ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
10 လ, ကလေး - ဆိတ်သငယ်အရာ၌ဝါကြွားနိုင်ပြီး, ဘယ်လိုအစအနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့?
စတိုင် Selena Gomez